Diyo post :: के हो नेपाल टेलिकमको ‘फोरजी’ सेवा ? यसरी चलाउनुस् निशुल्क ‘फोरजी’
के हो नेपाल टेलिकमको ‘फोरजी’ सेवा ? यसरी चलाउनुस् निशुल्क ‘फोरजी’ - Diyo post
के हो नेपाल टेलिकमको ‘फोरजी’ सेवा ? यसरी चलाउनुस् निशुल्क ‘फोरजी’
काठमाडौं, १८ पुस । नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट ‘स्लो’ भएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब यो झन्जटको अन्त्य भएको छ । नेपाल टेलिकमले ‘फोरजी’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । तत्काल राजधानी काठमाडौं र पोखरालाई केन्द्र बनाएर ल्याइएको ‘फोरजी’ सेवा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा हो । राजधानीको सोल्टी होटलबाट आईतबार सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले यो सेवाको औपचारिक सभारम्भ गरेका छन् । *444# गरेर तपाईंले यो सेवा एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसो त टेलिकमले चार जिबी डेटा निशुल्क दिने भएको छ । यो चार दिनभित्र सक्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । यो सेवा सुचारु भएसँगै निशुल्क सेवा लागु हुनेछ ।
टेलिकमका अनुसार थ्रीजीकै महशुलमा फोरजी सेवा लिन सकिन्छ । प्रीपेडका ग्राहकको लागि भने अहिले यो सेवा सुचारु भइसकेको छैन । तर, उनीहरुले रु ८ रुपैयाँमा १० एमबी डाटा पाउनेछन् । जुन दुइदिनसम्म चल्नेछ । रु ३५ मा ५० एमबी डाटा खरिद गर्न सकिन्छ एक हप्ताको लागि ।
टेलिकमका अनुसार २०० एमबीको एकसय ३० रुपैयाँमा एक महिना, ५०० एमबीको तीनसय तिरेर एकमहिना, एक जीबीको पाँचसय तिरेर एकमहिना, तीन जीबीको १२ सय ९० तिरेर दुई महिना, पाँच जीबीको १८ सय तिरेर तीनमहिना र १० जिबीको २८ सय तिरेर ६ महिनाको भ्यालिडिटी पाउन सकिन्छ ।
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामीनीराज भण्डारीका अनुसार एक महिनापछि टेलिकमको वार्षिकीको दिन माघ २२ मा प्रीपेड ग्राहकको लागि पनि फोरजी सेवा सुभारम्भ हुनेछ ।
फोरजी अर्थात्, ‘फोर्थ जेनेरेसन वायरलेस’ जसलाई चौथो पुस्ताको ताररहितको सक्षिप्त रुप भनिन्छ । यसलाई मोबाइल ब्रोडब्यान्ड (उच्च गतिको इन्टरनेटसहितको मोबाइल) सेवा मानिन्छ । फोरजीले तेस्रो पुस्ता (थ्रिजी) सेवालाई विस्थापित गर्छ । फोरजी अपलिंक र डाउनलिंक गरि दुई जोडीमा वितरण हुने फ्रिक्वेन्सी, समयलाई विभाजन गरि वितरण हुने फ्रिक्वेन्सी र बहु संकेतलाई एकिकृत गरि वितरण हुने फ्रिक्वेन्सी प्रणालीमा चल्छ । दुई जोडीमा वितरण हुने फ्रिक्वेन्सीलाई संक्षिप्त प्राविधिक भाषामा ‘ओएफडिएम’ भनिन्छ भने समयलाई विभाजन गरि वितरण हुने फ्रिक्वेन्सीलाई ‘टिडिएमए’ र बहु संकेतलाई एकिकृत गरि वितरण हुने फ्रिक्वेन्सीलाई ‘सिडिएमए’भनिन्छ । यसको मतलब, हामीले अहिले चलाइरहेको नेपाल टेलिकमको नमस्ते वा पोस्पेड मोबाइलमा फोरजी चल्छ ।
थ्रिजीको भन्दा तीव्र गतिमा इन्टरनेट
दूरसञ्चार सेवाको मापदण्ड बनाउने र व्यवस्थित गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियू) ले फोरजीका लागि मापदण्ड तोकेको छ । आइटियूको मापदण्ड अनुसार, मोबाइलमार्फत दिइने १ सय मेगाबिट्स प्रति सेकेन्ड (एमबिपिएस) गतिको इन्टरनेट सहितको सेवालाई फोरजी भनिन्छ । तर, धेरै मुलुकका कम्पनीहरुले यो गतिको मोबाइल इन्टरनेट नचलाई आफ्नो सेवालाई फोरजीको रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कम्पनीहरुले ४० मेगाबिट्स प्रतिसेकेन्ड (एमबिपिएस) गतिलाई फोरजीको वर्गमा राखेका छन् ।
आइटियूको मापदण्डलाई वेवास्ता गरेपनि फोरजीको गति थ्रिजीको तुलनामा भने निक्कै नै बढी हुने गर्छ । थ्रिजी सेवामा उपभेक्ताले जम्मा ३ देखि ४ मेगाबिट्स प्रतिसेकेन्ड (एमबिपिएस) गतिको मात्र इन्टरनेट चलाउन पाइरहेका छन् । फोरजी सेवा सुरु भएपछि उपभोक्ताले उच्च गतिको इन्टरनेट चलाउन पाउने छन् । छिमेकी मुलुक चाइनामा पनि फोरजी नै चलिरहेको छ । फोरजीको उपभोक्ताले थ्रीजी भन्दा निकै स्तरिय भिडियो कल तथा च्याट गर्न सक्छन् । त्यस्तै यहाँ ईन्टरनेटमा आधारित टेलिफोन सेवाहरुपनि सुविधा हुनेगर्छन् ।
नेपाली दुतावासको प्रश्न,‘हामीले सबै रकम प्रधानमन्त्री दैवि उद्धार कोषमा बुझाएका छौँ, विवरण किन नहेरेको ?
काठमाडौं, १० माघ । अमेरिका स्थित नेपाली राजदूतावासले बिनाशकारी भूकम्प पश्चात आएको राहत नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको स्पष्ट पारेको छ । ...
सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा मेरो समर्थन छ ः महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ
काठमाडौं, ९ माघ । महान्यायधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल ...
संसोधन विधेयक कोमामा गैसक्यो अव निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको विकल्प छैन
काठमाडौं, ८ माघ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले सदनमा टेबुल गरिएको संविधान संशोधन विद्येयकलाई ...
परिवारले प्रेम सम्बन्ध अस्विकार गर्दा एकै अंगोलोमा झुन्डिएर जाेडीकाे आत्महत्या, यस्तो छ वास्तविकता
झापा ७ माघ । अन्तर्जातिय प्रेमलाई समाजले अस्विकार गर्दा विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनाहरु घट्दै आएका छन् । पछिल्लो समय झापाको ...
विप्लव नेतृत्वको अखिल (क्रान्तिकारी) मा विद्यार्थी प्रवेशको लहर
जंग रेउले, घोराही, ६ माघ । विप्लव नेतृत्व नेकपा (माओवादी) को विद्यार्थी संगठनमा विद्यार्थी प्रवेशको लहर देशव्यापी रुपमा चलेको छ ...
राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा ‘सुनैको बाला’ ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना !
काठमाडौं, ३ माघ । सोमबार गणतान्त्रिक नेपाल पछि शितल निवासमा पहिलो तामझाम थियो । मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपतिकी छोरीको विवाहाको ...
‘वर्तमान सरकार चुनावबाट डराएर भाग्न खोज्दै छ’ : पूर्वमन्त्री पण्डित
काठमाडौं, ३ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार चुनावबाट डराएर ...
टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदादिँदै स्वामीले सञ्चारकर्मीमाथि पानी खन्याइदिए (भिडियो)
एजेन्सी, २ माघ । टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको क्रममा भारतका एक स्वामिले अन्तर्वार्ता लिने सञ्चारकर्मीमाथि नै आक्रमण गरेका छन् । न्युज वल्र्ड ...
टावल झुन्ड्याउने डन्डीमा बेल्टको पासो लगाएर झुन्डिएका थिए, यम बुद्ध
काठमाडौं, २ माघ । चर्चित र्‍यापर अनिल अधिकारी यम बुद्धले आफु बसेको घरको बाथरुममा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको घटनाले यतिबेला शुभचिन्तकहरुलाई ...